Dawlada Koonfurta Suudaan oo bilowday nidaamka CCTV iyo diyaar... | Universal Somali TV
Dawlada Koonfurta Suudaan oo bilowday nidaamka CCTV iyo diyaaradaha droneka si loola dagaallamo denbiyada.
Koonfurta Suudaan ayaa bilowday inay isticmaasho qalabka Kameradaha CCTV ga iyo diyaaradaha droneska ee illaalada amaanka taasoo ay mas'uuliyiintu sheegeen in ay gacan ka geysan doonto hagaajinta ammaanka ee caasimadda Juba halkaa oo dambiyada iyo rabshaduhu ay sare u kaceen.
Maamulaha shirkada Global Group, Kfir Shilder,oo ah shirkad laga leeyahay Israel islamarkaana hirgelinaysa mashruuca, ayaa sheegay in nidaamka ilaalinta uu leeyahay 11 kamaradood oo lagu rakibayo magaalada Juba iyo laba diyaaradood oo drone ka ah. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo deyn doonaa magaalada oo dhan.
Madaxweynaha K.Sudan Salva Kiir oo ka hadlayey habka uu u shaqeynayo. Aaladahan loogu talagalay amaanka ayaa sheegay inuu noqon doono mid amaan u ah qof walba oo ku nool caasimada Juba", isagoo intaa raaciyay in kuwa dadka ku dhaca wadooyinka dhexdooda hadda la ogaan karo, kamana baxsan karaan dembigooda."
Dalka ugu da'da yar Afrika ayaa waxaa ragaadiyay dagaalo sokeeye oo aan dhamaad lahayn kuwaasi oo dhexmarayay ciidamada daacada u ah madaxwenaha Salva Kiir iyo madaxweyne ku xigeenkiisii ​​hore Riek Machar. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun laguna barakaciyay boqolaal kun oo kale dhaqaalaha dalkana aad u saameeyay.
Bilihii ugu dambeeyay dad tira badan ayaa lagu dilay caasimada Jubba iyada oo burcada mararka qaar xiran labiska ciidanka amniga, ay boob iyo dhac u gaystaan shacabka mararka qaarna guryaha weeraraan habeenkii.
Kan-xigaShirka Dhaqaalaha Afrika: Ra&#039;ii...
Kan-horeMaxkamadda Ugu Sarraysa Mareykanka Oo...
40,635,678 unique visits